आज घट्यो सुनको मुल्य, कतिमा भयो त कारोवार ? – Ap Nepal
बुधबार नेपाली बजा’रमा सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । मंगलबार प्रति तोला ९० हजार ४०० रुपैयाँमा कारो’बार भएको सुनको मूल्य बुध’बार एक सय रुपैयाँले घट्दै ९० हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको हो ।
नेपाल सुन’चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाला सुन प्रति तोला ९० हजार ३०० रुपैयाँ का’यम भएको छ भने, तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला ८९ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।त्यस्तै यता बुधबार चाँ’दीको मूल्यमा समेत सामान्य गिरावट आएको छ । महासंघका अनुसार गत मंगलबारको तु’लनामा चाँदी प्रति तोला ५ रुपैयाँले घट्दै बु’धबार एक हजार ३२० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्, सरकारी का’र्यालयमा ११ अर्ब २८ करोड ४५ लाख २६ हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ बराबरको कार तथा जीप रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्या’लयले जनाएको छ । ३ हजार सरकारी कार्यालयमा (संघीय सरकारको मात्र) सो मूल्य बराब’रको गाडी रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै २ अर्ब ७ करोड २ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको मोटरसाइकल सर’कारी कार्यालयमा छन् ।
महालेखा निय’न्त्रकको कार्यालयले राख्न शुरु गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखमा सो मात्रामा गाडी रहेको दे’खिएको हो । सरकारको सम्पत्ति कति र कुन अवस्थामा रहेको छ अभिलेखमा हेर्न सकिनेछ । यसमा जिन्सी सामा’नको मात्र अभिलेख राखिएको छ ।
यद्यपि महा&लेखाले अहिले सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने क्रममा हाल सरकारी कार्यालयको मात्र अभिलेख रा’खिरहेको छ । हालसम्म संघीय सरकारको ३ हजार कार्यालय, प्रदेश सरकारको ५ सय र स्थानीय सर’कारको ४ सय कार्यालयको अभिलेख राखिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । ती कार्याल’यको सम्पत्ति संघीय सरकारको ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबर, प्रदेश सरकारको १० अर्ब र स्थानीय सरकारको ८ अर्ब बराबर रहेको अभिले’खमा देखिन्छ ।
सरकारी सम्प’तिको संरक्षण र सम्वर्द्धनको प्रभावकारिता, त्यसको सदुपयोग, मर्मत लगायतलाई अ’भिलेख राख्ने क्रममा हेरिएको महालेखा नियन्त्रकको का’र्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए । सार्वजनिक सम्पत्ति सूचना प्रणाली अन्र्तगत सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्न थालेको हो । तीनै तहका सरकारले यो प्रणा’लीलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल सर’कारको कात्तिक २० गतेको निर्णय अनुसार अभिलेख राख्न शुरु गरिएको हो । महालेखाले अबदेखि हरेक वर्ष सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । राजमार्ग, सरकारी जमिन लगायतलाई पनि अभिलेखमा समेट्ने गरी प्रणालीको विकास ग’रिरहेको कार्यालयको दाबी छ । यो आर्थिक बर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालयको सम्पत्तिको तथ्यांक आइ’सक्ने प्रवक्ता पौडेलको आंकलन छ ।
साढे चार अर्ब बढीको सु’रक्षा ब्यारेक
संघीय सरकारको ८ हजार १ सय ३ वटा सुरक्षा व्यारेक रहेको छ । सरकारी मू’ल्यांकन अनुसार सो ब्यारेक ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको हुन आउँछ । यस्तै २ सय ३८ वटा अतिथि गृह रहेको छ । यो भनेको १४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी’को हो । ६ करोड ६५ लाख ८४ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ बराबरको एम्बुलेन्स, २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको का’रागार भवन रहेको अभिलेखमा देखिएको छ ।
अस्थायी घ’रहरू ८८ करोड ८६ लाख, आवास योजनाका फ्ल्याट ३६ करोड ३५ लाख, निवास १ अर्ब ४८ करोड, कार्या’लय भवन ९ अर्ब ८६ करोड, सुरक्षा ब्यारेक ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँबराबरको मूल्यांकन गरिएको छ ।
संघीय सरकार मन्त्रा’लय अन्तर्गतका ४३ निकायसँग ८७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति भएको देखिएको हो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी रक्षा मन्त्रालयसँग २३ अर्ब ५४ करोड २६ लाख, गृ’हसँग १८ अर्ब ६१ करोड, भौतिक पूर्वा’धार तथा यातायात मन्त्रालयसँग ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ ।
अझैपनि कार्या’लयमा फर्निचर, सवारी साधन, मेसिनरी लेखांकन पूर्ण रुपमा उपलब्ध हुन नसकेको कार्यालयको भनाइ छ । सबै सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्न सके सो सम्प’त्तिको जतन समेत गर्न सकिने प्रवक्ता पौ’डेलको भनाइ छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग हुने गरेको आरोप लाग्दै आ’एको छ । अझै स्थानीय तह’हरुले त सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक दुरु’पयोग गर्ने गरेका छन् । रातोपाटीबाट
Prevअक्सिजन लेभल घटेपछी अभिनेता मदनकृष्ण श्रेष्ठ पुनः अस्पताल भर्ना.
Nextनेदरल्यान्डकी छोरी नेपाली बुहारिले पनि यसरी गाइन् ‘फुलबुट्टे सारी’-हेर्नुस रमाइलो (भिडियो सहित )
धादिङकी यी २२ बर्षिय युवतीको स्वर सुन्दा राजु परियार च’कित (हेर्नुहोस् भिडि;यो)